संघीयताको स्पिरिटअनुसार बजेट आउला ? - Karobar National Economic Daily
संघीयताको स्पिरिटअनुसार बजेट आउला ?
query_builderMay 29, 2017 9:04 AM supervisor_accountभगवान खनाल visibility463
काठमाडौंः संघीयता कार्यान्वयनकै वर्ष संघीयताको दर्शनअनुसार बजेट आउने÷नआउनेमा केही विज्ञहरूले सन्देह व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको भावना र स्पिरिटअनुसार बजेट आउनु पर्ने भए पनि आज (मंगलबार) सरकारले पेश गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीयताको मूल्य मान्यताअनुसार आउने÷नआउनेमा निश्चित हुने अवस्था नदेखिएको बताएका छन् ।
संघीयताअनुसार बजेट नआएमा संविधानको भावनाअनुसार मेल नखाने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । उनले स्थानीय तहमा काम दिइएकाले उनीहरूलाई पूर्ण बजेट दिनुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहको संरचना छैन, कर्मचारी भएनन् भनेर स्थानीय तहलाई थोरै बजेट जानु विनियोजन हुन नहुने बताउँदै कर्मचारी भएनन् भन्नु नालायकी हो, यो सन्दर्भ नै हैन । किनकि उनीहरू भन्दा बढी काम गर्ने र गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि आइसकेकाले उनीहरूलाई पूर्ण बजेट दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
संघीय वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको ढाँचामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नआउने हो कि भन्ने सन्देह गर्छन् ।
उनले संविधानमा कामलाई बजेटले पछ्याउने (फक्सन फलोज द फाइनान्स) भन्ने सिद्धान्तमा यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नल्याउने हो कि भन्नेमा संशय व्यक्त गर्छन् ।
विज्ञ देवकोटा प्रदेश गठन नहुनु, मन्त्रालयहरूको संख्या नघटाइनु, कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन नहुनु र विषयगत मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू अझै पनि विगतमा झैं कायम रहेकाले संघीयताको दर्शनअनुसार बजेट आउनेमा ढुक्क हुने स्थिति नरहेको बताउँदै उनले संविधानका अनुसूचीका अधिकारअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नआउने देखिएको बताउँछन् ।
उनी बजेट अझै पनि केन्द्रमा नै राख्न खोजिएको छ कि भन्ने देखिएको बताउँछन् । केन्द्रले बजेट राख्नु भनेको त्यसको कार्यान्वयनका लागि गरिने ठेक्का आदि प्रक्रियामा फेरि पनि चलखेल गर्न खोज्ने नियत देखिएको उनले बताए । विकासका ठूलो बजेट चाहिँ केन्द्रले नै ब्लकमा राख्न खोजेको छ । शिक्षकको तलब चाहिँ स्थानीय तहमा जाने गरी बजेट आउने देखिन्छ ।
वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ हेमराज लामिछाने संघीयताको जग स्थानीय सरकार भएकाले त्यही स्पिरिटमा बजेट जानुपर्ने बताउँछन् । उनले स्थानीय सरकारको संरचना तयार नभइसके पनि अघिल्ला वर्षका तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको स्थानीय तहका लागि बजेट बढी जाने देखिएको चाहिँ बताए । “संविधानमा कामको जिम्मेवारी तोकिएअनुसार त्यसको विस्तृतीकरण भएको त छ,” लामिछानेले भने, “तर यसबारेमा धेरैको बुझाइ स्पष्ट छैन ।”
उनले आउने वर्ष संघीय बजेट कार्यान्वयनको सिकाइ वर्ष हुने बताए । “पहिलो वर्ष स्थानीय तहका लागि बजेट सार्वजनिक हँुदैछ,” उनी भन्छन्, “आन्तरिक स्रोतको पनि टुंगो छैन । कर्मचारी पनि पुगेका छैनन्, त्यसैले बजेट पनि ट्रायलको रूपमा जाने देखिन्छ ।”
सरकारका एक सचिवले पनि संघीयताको मूल दर्शनअनुसार बजेट आउनेमा ढुक्क हुने स्थिति नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए । यसैबीच, सरकारले पछिल्लो समय थपेका २२ स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको स्रोतले बतायो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फसैलाअनुसार ७४४ स्थानीय तहका लागि मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ, स्रोतले भन्यो ।
बजेट संघीयता संघीय बजेट